China Ejiri Ntanye Oge China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Ntanye Oge - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Ntanye Oge)
Anyanwụ weere ihe ntanye ọkụ 50W
Anyanwụ weere ihe ntanye ọkụ 50W N'abalị, ìhè anyanwụ 50W Led Area ga-agbanwe na-akpaghị aka ma na-enwu ọkụ dị ọcha site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-enwu ọkụ nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a Solar Dugara Garden Light ga atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe anyanwụ na-abịa elu....
2GB 150W Led Linear Oge Mgbaaka
Nke a 2ft Dugara Linear eletrik bu ndi na-azoputa ego, ike nke oma karia ihe omimi ma obu fluorescent T5. Ngwunye Line 150 a nke a na-ahọrọ maka ọkụkọ, ụlọ mgbakọ, na ngwa ngwa. Ejiri ihe nkedo nke ejiri kpochapu nke a na- eme ka a ghara ikpochapu ya, 120 ° Beam Angle na ihe eji eme ihe. Ihe ndekọ ndị a dị n'usoro...
150W Na-agbaso oge a kacha mma
Nke a 150W Na-agbaso oge a kachasị elu Ngwá ọrụ bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-enwe nchebe ma...
100W Na-agbaso Ndazi Oge Ọhụrụ Ngwado
Bbier 100W Led Modern Post Top Ngwado bụ nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 130lm / watt, dochie 250W MH / HID / HPS. Nke a na-emepụta oge a na-arụ ọrụ na ntanetị nke ọma maka oge 50000 nke ndụ. Nke a 100W Na-agbaso oge a kachasị mma DI 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na anụ ọhịa anụ ọhịa 3 dị mfe ịnwụnye ọkụ ọkụ, ubi na...
Ejiri Ntanye Oge Ejiri Ntanye Akara Oge Iyi Ejiri Ntanetị Ejiri Leta Kwa oge Ejiri Ije Ozi Ejiri Igwe Ntanetị Ejiri Agbanwe Aja Ejiri Ngwunye Elu Bay